I-ASL: Ungayisayina njani ngaMalungu oSapho lwakho
Ngu-Adan R. Penilla II, II, u-Angela Lee Taylor
Ukuba ufuna ukwabelana ngolwazi malunga nosapho lwakho usebenzisa iNtetho yeZandla yaseMelika (ASL), kufuneka uyazi imiqondiso embalwa. Ukuchaza usapho lwakho yenye yeendlela zokuxelela umntu ngawe. Sebenzisa imiqondiso eqhelekileyo kule theyibhile kunokwenza ukuba usapho lwakho olungaqhelekanga lubonakale luqhelekile.
Iimpawu zamanye amalungu osapho lwakho, ezinje ngootatomkhulu noomakhulu, inzima into:
Umkhulu-sihlobo: Ukuthetha ngomakhulu notatomkhulu wakho okanye abazukulwana bakho, biza i-G-R-A-N-D ngeminwe, emva koko utyikitye indima yomntu.
Abasebukhweni: Sayina indima yomntu emva koko utyikitye umthetho.
Izalamane-izihlobo: Ukutyikitya utat'omzali, utat'omncinci, utat'omama, okanye utata womtshato wesibini, bamba isandla sakho siqonde ngqo esifubeni sakho, kwaye ubhontsi wakho ukhombe ngqo kwaye ukhombise umnwe ngaphambili, xhawula isandla sakho ngapha nangapha; emva koko sayina eyomntu. (Luhlobo lukhangeleka ngokungathi ukhombe umntu onesandla esigevezelayo.)
Abantakwenu abantakwenu: Sayina umntakwenu ngesiqingatha se-1/2, emva koko umzalwana okanye udade.
inyathelo elikhawulezayo linika amandla indlela eyi-2
Iindleko ezijikelezayo ezintathu
ukulungisa njani uxinzelelo lwamavili aphantsi
Ixabiso le-keytruda ngebhotile
ubungakanani bekhadi le-galaxy s8 sd
ukhathalela njani umthungo